Jacayl dhexmaray gabadh Ciraaqiyad ah oo qaxooti ah iyo askari reer Mecadonia ah - BBC News Somali
Image caption Lamaanahan waxay is guursadeen bishii July
Nuura oo 20 jir ah ayaa ka soo tagtay gurigoodii ku yaalay Diyala oo ah degmo ku taalla bariga Ciraaq ka dib markii ay dagaallo ka dhaceen 2016-kii, iyada oo ay weheliyaan waalidkeed, walaalkeed iyo walaasheed.
'Qof baa maskaxdaada xaday!'
Habeen ayay casho adeen waxaana Dodevski ka muuqatay in ay shucuurtiisu kacsan tahay isaga oo biyo badan cabay gacmihiisuna ay gargariirayeen wuxuuna nuura waydiistay in ay is guursadaan balse waxay ku tiri waad kaftamaysaa toban jeer ayuuna ku celceliyay.
Markii dambe ayayna ogolaatay in ay xaaskiisa noqoto.
Image caption Macedonia ayaa marin u ahayd qaxooti badan
Image caption Lamaanahan ayaa hadda ku nool magaalada Kumanovo